Maamulka Puntland iyo dowladda Cumaan oo ka shiraya la dagaalanka kooxaha burcadbadeeda. – Radio Daljir
Bosaso, Apr 10 -Dowladda wadanka Cumaan ayaa ku casuumtay dowladda Puntland shir socon doona muddo sadex maalmood ah, oo looga hadlayo iskaashi ay labada dowladood ka yeeshaan la dagaalanka kooxaha burcadbadeeda iyo wada shaqayn dhinaca amaanka ah.
Shirka oo furmi doono maalinta Khamiista ah ee soo socoto ayaa waxaa dowladda Puntland uga qaybgalaya wefti uu hogaaminayo wasiirka amniga ee dowladda Puntland Col. Khaliif Ciise Mudan.
Wasiirka amniga dowladda Puntland Khaliif Ciise Mudan ayaa waraysi kooban uu siiyay warbaahinta Daljir ka hor inta uusan u dhoofin dalka Cumaan waxaa uu sheegay, inay rajaynayaan shirka inuu kasoo baxo heshiis dowladda Puntland iyo Cumaan ay ka gaaraan la dagaalanka kooxaha burcadbadeeda iyo inay taageerro ka siiso adkaynta nabadgalyada.
Dowladda Cumaan ayaa xiriir ganacsi oo qote dheer la leh dowladda Puntland, waxaana inta badan dalkaasi loo dhoofiyaa maydiga,fooxa iyo waxyaabaha kale ee laga farsameeyo udugga oo siweyn looga dhoofiyo Puntland.